ऋण बोकेर जापान, मृगौला फेल भएर घर! : गरिवको पीडा – Complete Nepali News Portal
ऋण बोकेर जापान, मृगौला फेल भएर घर! : गरिवको पीडा
August 3, 2017	2,528 Views
टोपलाल अर्याल,गुल्मी,१८ साउन। आफ्नो भविष्य र परिवारको खुसीका लागी ०७३ साउन ४ गते जापान गएका रुरु गाउँपालिका १ रिडीका ३१ बर्षिय धिरज श्रेष्टले मृगौला फेल भएर घर आउँला भनेर कल्पना गरेका थिएनन । सामन्य परिवारका धिरज १२ लाख गाउँमा क्रृणधन गरेर जापान गएका थिए । तर सात महिनामै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । घरेलु कामदारको रुपमा उनी जापान गएका थिए । शुरुमा निरन्तर खोकी लोपछि श्रेष्टले जापानको आशा कित्ता अस्पतालमा चेकअप गराएका थिए । फागुन दोस्रो साता चेक जाँच गराउँदा दुवै मृगौला फेल भएको थाहा पाएपछि उनी फागुन २९ गते नै नेपाल फर्किए ।
रुरु नेटवर्क मार्फत १२ लाख २६ हजार संकलन
सामाजिक संजाल मार्फत समाजिक काममा सक्रिय रुरु नेटवर्क प्रालिले दुवै मृगौला पीडित श्रेष्ठका लागि १२ लाख २६ हजार संकलन गरेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरुले नेटवर्क मार्फत उनलाई सहयोग गरेका छन् । नेटवर्कले धिरज बचाउ अभियान नै संचालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म संकलन भएको १२ लाख चेक मार्फत र २६ हजार नगद सहित उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गएिको नेटवर्कका संचालक सुन्दर कसजुले बताए । ‘जसले जसरी गरेपनि सेवा र समाजिक विकास नै हो,’कसजुले भने,‘स्वदेश तथा परदेशमा बस्नेले देखाएको सहानुभुति उदाहरणीय छ ।’ दुईमा बस्ने बाबुराम गोतामे मार्फत दुई लाख ६० हजार दुई सय ७५, सागर थैव हङकङ्ग मार्फत ६० हजार, कुमार अधिकारी मार्फत कतारबाट ५६ हजार तीन सय ८२ लगायत धेरैले आर्थिक सहयोग गरेको उनले बताए ।
गुल्मी पाल्पा र स्याङ्गजाका सामाजिक तथा अन्य विविध खबरहरु प्रकाशन गर्ने गर्दछ । साथै नेटवर्क मार्फत नै रिडी प्राविमा चार लाखको कोष खडा गरिएको छ । गरिवका लागि निशुल्क शिक्षा नाम दिएको कोषबाट प्रत्येक बर्ष विपन्न बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको नेटवर्क संचालक कसजुले बताए । प्रत्येक बर्ष १५ देखि २० जना बालबालिकालाई पोशाक, कापी किताव, झोला तथा अन्य सवै सामग्री कोष मार्फत निशुल्क बितरण भैरहेको छ । साथै गएको बर्ष नेटवर्क मार्फत नै जिल्लाको थानपती र ग्वादीका ११ घर आगोलागी पीडितहरुलाई पुर्ननिर्माणको लागि छ लाख ५० हजार संकलन गरि बितरण गरिएको थियो ।
( पत्रकार टोपलाल अर्यालले तयार गर्नु भएको रिपिर्ट)